Tabaha ugu fiican ee loogu talagalay Ereyga | War gadget
Tabaha ugu fiican ee ereyga
Qolka Ignatius | | Aplicaciones, Software
In kasta oo siyaabo kala duwan oo aan uga heli karno suuqa marka la qorayo dukumiintiyada qoraalka, la abuurayo waraaqo ama bandhigyo, xalka uu Xafiiska mar walba na siiyo waa kan ugu isticmaalka badan, oo sidaas darteed, sida ugu fiican ee lagu qiimeeyo suuqa, in kasta oo ay xaqiiqdu tahay in aysan lacag la'aan ahayn.
Iyada oo ku dhowaad 40 sano ay suuqa ku jirtay, ereyga ayaa ku soo baxay mudnaantiisa processor ugu fiican, Erey-sameeye na siiya shaqooyin tiro badan, qaar badan oo ka mid ah aan la aqoon shaqooyin laakiin taasi waxay naga caawin kartaa inaan kor u qaadno wax-soo-saarkeenna maalinba maalinta ka dambeysa.
Tirada shaqooyinka iyo fursadaha uu ereygu ina siinayo waxay qancinayaan baahiyaha dhammaan isticmaaleyaasha, oo ay ku jiraan kuwa ugu xirfadda badan. Haddii aad rabto inaad ogaato qaar ka mid ah shaqooyinka uu ereyga na siinayo, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska, maxaa yeelay hubaal waad ogaan doontaa shaqooyinka aadan ogeyn inaad ku sameyn karto Microsoft Word.
1 Raadi oo beddel erayada
2 Qaamuus isku mid ah
3 Ka raadi ereyada internetka
4 Turjum dukumeenti, sadar, ama xariijin
5 Abuur qoraalo aan kala sooc lahayn
6 Soo kabso feyl aan la keydin
7 Ku ilaali dukumiinti erey sir ah
8 Kudar calaamadee
9 Ku keydi qaab PDF ah
10 Samee boodhadh
11 Kudar qaabab qoraalka
Raadi oo beddel erayada
Markaan dhammeyno shaqo, waxay u egtahay in markaan dib u eegnay kadib, aan qalad kalmad ah, eray aan u maleynay inaan seegi karno ilaa aan ka eegnay meel ka baxsan qaamuuska Ereyga. Xaaladahaas, gaar ahaan marka dukumiintiga uu aad u ballaaran yahay, Ereygu wuxuu noo oggolaanayaa ma aha oo kaliya inaan raadino ereygaas si aan wax uga beddelo, laakiin sidoo kale wuxuu noo oggolaanayaa si toos ah ugu beddel midda saxda ah.
Shaqadan waxaa laga helayaa sanduuqa raadinta ee ku yaal geeska kore ee midig ee arjiga.
Qaamuus isku mid ah
Waxa intaa dheer in lagu daro mid ka mid ah higaada iyo naxwayaasha ugu fiican ee aan maanta ka heli karno codsi kasta, maadaama uu yahay erey-sameeye wanaagsan oo qiimeeya milixdiisa, sidoo kale waxay kudartaa qaamuus isku mid ah, qaamuus noo ogolaanaya inaan ku badalno ereyga la soo xulay iskumid ah kan ugu haboon qoraalka.
Si aad u gasho Qaamuus isku mid ahKaliya waa inaan dooranaa erayga oo aan gujino batoonka midig ee saxda ah oo aan dhigno jiirka dusha 'Synonyms option', oo ah ikhtiyaar soo bandhigi doona liis la mid ah ereyga aan raadineyno.
Ka raadi ereyada internetka
Markii aan qoraynay dukumiinti oo aanan kala cadeyn in erayga aan adeegsanay uu sax yahay, waxa caadiga ah waa in la tuuraa biraawsarka ay kooxdeena tahay inay hubiyaan. Nasiib wanaagse, Microsoft way ka fikirtay arrintaas oo waxay na siisay a raadiyaha ereyga internet-ka ku dhex-dhisan codsiga laftiisa. Muuqaalkaan waxaa lagu magacaabaa Smart Search.
Si aan u adeegsanno shaqadan, waa inaan doorannaa erayga su'aasha ah, riix batoonka midig oo xulo Smart Search. Waqtigaas, waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhinaca midig ee arjiga, natiijooyinka raadinta ee Bing ee ereygaas, si aan u hubino haddii uu si sax ah u qoran yahay, haddii uu yahay eraygii aan raadineynay ama waa inaan sii wadnaa raadinta.
Turjum dukumeenti, sadar, ama xariijin
Haddii shaqadaada, hiwaayaddaada ama daraasaddaada awgood, sida caadiga ah lagugu qasbay inaad la tashato ama aad ku qorto dukumentiyo luqado kale ah, Microsoft waxay si caadi ah noo siisaa turjumaan, tarjumaan mas'uul ka ah inuu si otomaatig ah u tarjumo dukumiintiga oo dhan ama kaliya qoraalka aan soo xulnay. Turjubaankan wuxuu ka yimid Microsoft wax shaqo ahna kuma laha tan Google.
Haddii qoraalka aan rabno inaan turjunno, kuma daro ereyada iskudhafka ah, tarjumaadu waxay noqon doontaa ficil ahaan dhameystiran oo la fahmi karo. Turjubaankan isku dhafan wuxuu na siiyaa ficil ahaan isla natiijooyinka sida tarjumaha Google.
Abuur qoraalo aan kala sooc lahayn
Markii nalagu qasbo inaan qoro qoraalo si aan u buuxino meelaha banaan ee dukumiinti, buug yar oo xayeysiin ah ama nooc kale oo feylal ah, waxaan miciinsan karnaa inaan nuqul ka sameysano oo aan ku dhajino dukumiintiyada kale. Ereygu wuxuu noo siinayaa xal aad u fudud dhibaatadan yar. Qorista = rand (tirada cutubyada, tirada jumladaha), Ereygu wuxuu na tusi doonaa tirada tuducyada ka kooban khadadka aan soo sheegnay.
Qoraalka ina tusaya, runti maahan nasiib, waxaad sameyso waa ku celcelis iyo marar badan qoraalka tusaalaha ah ee aan ka heli karno font-ka aan ku isticmaalno dukumiintiga aan sameyneyno.
Soo kabso feyl aan la keydin
Xaqiiqdii in ka badan hal munaasabad, waxaad aragtay sida kumbuyuutarkaagu si lama filaan ah u xirmay, korontada u baxday, batteriga kaa dhammaaday ... ama sabab kaleba, kama aadan taxaddarin inaad keydiso dukumintiga. In kasta oo ay umuuqato dhibaato caqli gal ah, hadana way ka badantahay intaad awoodid. Waa wax caadi ah, in dhowr nooc, waxaan fursad u leenahay soo ceshano dukumiinti erey ah oo aanan kaydin.
Ku ilaali dukumiinti erey sir ah
Haddaynu keliya adeegsanno qalabkeenna, oo lagu ilaaliyo lambarka sirta ah ee aynu ognahay oo keliya, muhiim ma aha in la ilaaliyo dukumintiyada aynaan rabin inay dadka kale arkaan. Haddii aan dooneyno inaan dukumintiga la wadaagno dadka kale, iyada oo aan dhex-dhexaadiyayaashu suurtagal ahayn inay helaan, sida ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah ku ilaali sirta. Talo: ha u dirin lambarka sirta ah ee lala galo faylka.
Si aan u ilaalino dukumiinti, waa inaan gujino batoonka agabka qalabka iyo dukumiintiga Difaac. Erey waxay na weydiin doontaa labo eray sir ah, in la furo dukumintiga oo la saxo. Furaha sirta ah maahan inuu isku mid ahaado labada xaaladood, maxaa yeelay maahan in kuwa helaya isla dukumiintiga isku midka ah ay u baahan karaan inay wax ka beddelaan.
Haddii dukumintiga aan abuureyno uu leeyahay ujeedo ganacsi, si looga fogaado adeegsiga meel ku taal salka hoose si aan u dhigno xogtayada, waan awoodnaa kudar sumad-tilmaameedka hoose, astaan-biyood u noqon kara qaab qoraal iyo qaab muuqaal labadaba. Sida iska cad, hadii aanaan rabin in la tirtiro, marka la wadaagayo dukumiintiga waa inaan ku sameynaa qaab aan ka aheyn Word, tusaale ahaan PDF, ama aan ilaalino dukumiintiga si aan cid kale u habeyn karin.
Ku keydi qaab PDF ah
Sida uu ereygu halbeeg ugu noqday warshadaha kombiyuutarka, qaabka faylka PDF (Adobe) isaguba sidoo kale. Waad ku mahadsan tahay tan, Ereygu wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku kaydinno faylasha qaab PDF ah, oo ah qaab ku habboon in lala wadaago dukumiintiyada aanan dooneynin inuu tafatiro qofka noo qaata. Ikhtiyaarkan waxaa laga helayaa Badbaadinta sida xulashada oo gujinaya hoos-u-dhigga qaababka ay na siiso.
Mid ka mid ah shaqooyinka sida yar loo yaqaan ee ereyga ayaa ah suurtagalnimada Abuur boodhadh mahad leh shaqada Ereyga Farshaxan, mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn codsigan taasna marar badan ayaa loo isticmaalay 90-meeyadii si loo sameeyo boodhadh. Hawshani waxay noo ogolaaneysaa inaan qoro qoraal oo aan siino qaabka iyo midabka aan dooneyno.
Kudar qaabab qoraalka
Ficil la xiriira fursadaha garaafka ee Ereyga Farshaxanka na siiya, waa suurtagalnimada in lagu daro tirooyin, sidoo kale sanduuqyada qoraalka, fallaaraha jihada, qalbiyada, wareegyada, qaababka joomatariSawirradan waxaa loo geliyay sidii inay ahaayeen sawir, marka waxaa loola dhaqmayaa si la mid ah sawirrada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Tabaha ugu fiican ee ereyga
Habka madow wuxuu ku yimaadaa iPhone iyo taleefankaaga Android, sida loo kiciyo
Digniinta beenta ah ee loo yaqaan 'coronavirus' taleefanka 632282524